मुना ह त्याका’ण्डः प्रहरीले कामदार चाैधरीको पेन्टीमा भेटायो यस्ताे सुराकि! हर्नुस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > मुना ह त्याका’ण्डः प्रहरीले कामदार चाैधरीको पेन्टीमा भेटायो यस्ताे सुराकि! हर्नुस्
काठमाडौँ । ललितपुरको सानेपामा पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नीको ह त्यापछि आफैँ पनि आ त्म ह त्या गर्ने कामदार विजय चौधरीको पे’न्टीमा प्रहरीले र’गत र वि’र्य भेट्टाएको छ। प्राप्त सिसिटिभी फुटेजका आधारमा सोमबार बिहान १० बजेर १० मिनेटमा चौधरीले मुनालाई किचेनमा काम गरिरहेका बेला पछाडिबाट डोरीले घाँ’टी न्याँ’केका थिए । त्यसपछि करिब १३ मिनेट चौधरीले के गरे भन्ने सिसिटिभी फुटेजमा केहि पनि देखिँदैन।
१० बजेर २३ मिनेटमा चौधरीले मुनाको टाउकोमा केही चिजले सातपटक हि’र्काएको पनि सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ। त्यसपछि करिब ४५ मिनेटसम्म उनी घटनास्थलमै ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिएको छ। सिसिटिभी फुटेजअनुसार ११ बजेर ८ मिनेटसम्म उनी किचेनमा ओहोरदोहोर गरिरहेको देखिएको छ। ११ बजेर २० मिनेटमा पूर्वसचिव कार्की घरमा आइपुग्दा चौधरी झ ’न्डि एको अवस्थामा देखिए भने मुना किचेनमा लडिरहेका थिए।
१० बजेर १० मिनेटमा मुनालाई घाँटीमा डोरीले न्याँ’केर ल’डाउनुअघि पनि किचेनबाहिर चौधरी ओहोरदोहोर गरिरहेको सिसिटिभी फुटेजमा देखिएको छ। १० बजेर १० मिनेटमा मुनालाई घाँटीमा डोरीले न्याँकेर लडाएपछिको १३ मिनेटसम्म चौधरीले के गरे भन्ने चाहिँ खुल्न सकेको छैन। चौधरीको पे’न्टीमा ‘र’गत र वि’र्य लत्पतिएको देखिएको छ। पूर्वसचिव पत्नी मुनाको मासिकश्राव चलिरहेको पनि प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। प्रहरीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
पूर्व सचिव पत्नी प्र’करण: सिसी क्यामेरामा देखियाे कामदारकाे यस्तो दृश्य काठमाडौं । मन्त्रालयका पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको ह त्या कामदार विजय चौधरीले गरेको पुष्टि भएको छ। पूर्व सचिव कार्कीकाे ललितपुरस्थित घरमा राखिएको सिसी क्यामेराबाट मुनाको ह त्या कामदार चौधरीले नै गरेको पुष्टि भएको हो ।
मुनाको ह त्यापछि चौधरीले झु न्डिएर आ त्म ह त्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । भान्छामा राखिएको पिर्काले हिर्काएर चौधरीले मुनाको ह त्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ । सिसि क्यामरामा चौधरीले मुनालाई घाँटीमा समातेर घि सार्दै लगेको दृश्य देखिएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । प्रहरीका अनुसार दृश्यमा चौधरीले मुनालाई आ क्रम ण गरेको समेत देखिएको छ।
चौधरीलाई कार्की परिवारले सानै देखि घरमा पालेका थिए । कार्की पत्नी मुना र कामदार चौधरीबीच कुनै रिसीबीले यस्तो घ टना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
घटनाका बेला पूर्व सचिव कार्की भने घरमा थिएनन् । कार्की बिहानै पशुपतिनाथ दर्शनका लागि गएका थिए । पशुपतिबाट फर्किएर आउँदा उनले घरमा रक्ता म्य स्थिति र पत्नी अचेत अवस्थामा देखे । त्यसपछि उनले प्रहरीलाई खबर गरेर पत्नीलाई स्टार अस्पताल पुर्याएर । अन्तत पत्नी मुनाको पनि अस्पताले मृ त घोषणा गर्यो । घटना बारे प्रहरीले बिस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।